Tuesday November 10, 2020 - 09:35:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Isagoo khudbad ka jeedinayay telefeshinka afka dowladda ku hadla ayuu sheegay in ciidamadiisu ay ku guuleysteen dib uxuraynta gobolkan oo sanaddii 1992-dii ugacan galay ciidamada Armeeniya.
Heshiis ay wada saxiixeen Ruushka,Azarbiyaan,Armeeniya iyo Turkiga ayaa dhigaya in ciidamada dowladda Armeeniya ay isaga baxaan deegaannada ay uga suganyihiin gobolka Kaarna Baaq taas bedelkeedna ay Azarbijaan ogolaato xabad joojin.
R/wasaaraha Armeeniya oo hadlayay ayaa heshiikan ku tilmaamay mid murugo ku ah dowladdiisa iyo shacabkiisa sidaas darteedna ay ku qasbanyihiin in ay qaataan guuldarro si loo badbaadiyo buu yiri shacabka Armanka.
Dowladda saliibiyadda Ruushka ayaa sheegtay in kumanaan kamid ah ciidamadeed ay qaab nabad ilaalineed ugeynayso Naagoorni Kaarna baakh si ay u adkeeyaan xabad joojinta ayna ammaan usiiyaan ciidamada Armeeniya muddada isbuucyada ah ee ay gobolka uga baxayaan.
Qabsashadii magaalada Susha ee maalin ka hor ayaa larumeysanyahay in ay dowladda Armeeniya ku qasabtay aqbalidda guuldarro weyn
Dowladda Itoobiya iyo Maamulka Tigray oo guulo kala sheegtay.